Voronezh State Medical Academy - Study Medicine, Mbbs muRussia
nyika : Russian Federation
guta : Voronezh
inotangwa : 1802
Musakanganwa kuti kurukura Voronezh State Medical Academy
Kunyoresa pana Voronezh State Medical Academy
The State Budgetary kwo Yepamusoro Professional Education «Voronezh State Medical yunivhesiti zita pashure N.N. Burdenko »of Bazi Public Health the Russian Federation inozivikanwa seimwe nyika vaitungamira kutsvakurudza uye kudzidzisa nzvimbo ine dzinokwana vanenge 5,000 vadzidzi. Zviri remabhuku masangano dzidzo Russia. Nhoroondo yaro anodzokera 1802 - Musi Derpt University nheyo, izvo vakatamira Voronezh muna 1918. mu 1930, zvayo kurapwa fakaroti akava yakazvimirira zvokurapa sangano, iyo yakawana chikoro chacho kwemaonerwo 1994. The University zvakaratidza kukosha kwayo sechinhu zvedzidzo sangano kwokudzidzisa yepamusoro uye kuitisa mazhinji kwesayenzi Zvemishonga, bhayoroji, uye Pharmacy. The unhu waro waivako zvinoratidzwa Rating pakafunuka, maererano iyo yunivhesiti kunobatanidzwa pamusoro zvikoro gumi dzokurapa yeRussia. Kubva pakuvambwa kwayo, izvozvo akagadzirira kupfuura 40 zvokurapa nezvokurara zviuru, kusanganisira vokune dzimwe nyika vane kubva 56 Nyika Europe, Asia uye Africa.
Akatanga paYunivhesiti ndiye Government RF. Akatanga wacho masimba uye competencies ndezvaJehovha Bazi Public Health the Russian Federation. The University ane nokusingaperi rezinesi kuti basa redzidzo uye nehurumende accreditation. The University anoita mabasa ayo pamusoro achishandisa Mutemi.
The nemamiriro University zvino yapuwa 7 mano uye 3 Kudya dzidzo.
Kupfuurisa 800 vepachikoro kusanganisira 149 Doctors Kurapwa Sciences, 91 mapurofesa, uye 525 Miteva muna Medical Sciences vanobatanidzwa pakudzidzisa uye basa nesayenzi pane 78 madhipatimendi of University.
Basa dzidzo Voronezh State Medical University ainzi pashure N.N. Burdenko chiri kuitwa zvinoenderana zvirongwa huru yedzidzo yakataurwa kuchikoro pachishandiswa ehurumende mitemo dzidzo nokuda yepamusoro nyanzvi dzidzo uye yechipiri nyanzvi dzidzo panyaya nokuda pfungwa zvirongwa ari mapoka aifarirwa shamwari zvinoenderana redzidzo uye methodological.
The University yave kushandisa kwetemu hurongwa.
Kurovedza Rokutenderwa ine mumatanho maviri:
– Pre-zvekuchipatara (1-2 makore);
Hospital clerkships zvinoitwa pamwe kudzidza kunotoda kurapwa nokuranga kubvira 2wana gore kudzidza;
– zvekuchipatara (3-6 makore).
Facilities of yunivhesiti
Zvivako of University kushumira kusangana zvokurapa uye mishonga dzidzo zvinodiwa. Huru zvivako zvivako ndedzinotevera:
– 5 nokudzidziswa zvivako
– Vana Clinical Hospital
– 29 zvekuchipatara nzvimbo
– Vakanyatsoshongedzwa rabhoritari zvivako
– Computer makirasi pamwechete Internet kuwana
– Raibhurari ane danda 700 000 zvinhu Yedzidzo uye kwesayenzi mabhuku
– The paruzhinji Eenhede Hurongwa rinosanganisira kandini ane 120-chigaro dzokudyira-nzvimbo; panewo tudyo-nembariro vadzidzi yose hostels uye University. kunze, mukuru vadzidzi patinenge tawirwa kurovedzwa zvekuchipatara nzvimbo yacho kuyunivhesiti mukana kushandisa canteens ari zveutano zvivako.
– Kurapwa sangano. Munguva yose nguva yokudzidza, vadzidzi Rokutenderwa uye dhigirii vari rinotungamirirwa yezvokurapa mudonzvo Municipal Healthcare Facility «City Outpatient Clinic #15 (Student Clinic)»Nokuti guta Voronezh. The vemumapato utano muzinda Clinic yaiva pfupi nepedyo kuti Hostel #3 anoshanda nokuti zvivanakire vadzidzi.
– The mutambo Zvivako vanosanganisira yemitambo uye gym yakaoma ine zvachose nharaunda 2838.2 m² (indoor centre) nepokuongorora kushambira-dziva, gymnastic nharaunda, muto bhaa, uye kuongorora munhu akaidza kamuri.
Zvakasiyana-siyana dzokudzidzisa siyana uye nzira dzinoshandiswa. Vari:
– Traditional siyana kudzidzisa: hurukuro, misangano, makirasi uye chipatara clerkships anobatsira.
– Modern dzokudzidzisa uye unyanzvi: kombiyuta uye Internet makirasi, dambudziko-inobva padzidziso, Video-kwakavakirwa makirasi, dzidzo Software.
– zvokuwedzera makosi.
– Self-muripo kunokurudzirwa.
Kupinda zvidzidzo uye clerkships mutemo unoti vadzidzi vose.
unyanzvi Clinical dzinokudziridzwa munguva placements panguva kurapwa nzvimbo yacho vemumapato zvipatara. Kutanga kubva 2wana gore kudzidza, Dzidziso wadhi anotsanangura rinotsigirwa pamwe kumikidzo murwere-chiremba ukama. The clerkships vari raitarisirwa zvikuru vanokwanisa uye ruzivo vanachiremba.
yokungotaura ruzivo uye kurapwa unyanzvi paakamubvunzurudza unyanzvi Both anosanganisira:
– Pass / kukundikana grading miedzo
– mapoka Kukurukurirana.
Final advertising zvinoitwa kuburikidza nehurumende okupedzisira bvunzo, iyo kupa tinyatsonzwisisa ruzivo yokungotaura uye unyanzvi zvekuchipatara.
The muzvimwe zvinoitwa evadzidzi vanosarudzirwa nemasangano yavose uye chakabatikana kusikwa rokunyaradza zvinhu yavo yokuzorora, kuzvidzora sangano, uye nokuzvidzora Kuziva. The Center nokuti Student Cultural Dzokuparidza, Mudzidzi Sports Club, Mudzidzi Scientific Society, Hostel Students 'Councils, zvikwata zvevadzidzi, Mapoka pwere chokuzvidira yakagadzirirwa matambudziko.
Schools / mumakoreji / Departments / Courses / mano
The nokukuyeuchidzai pamusoro General Medicine, Pediatrics, Dentistry, chitoro chemishonga, uye wokudzivirira Medicine chitima nyanzvi pahwaro dzidzo yakakwana yechipiri.
The rorusununguko Healthcare Management Development kudzidzisa vanonyatsokwanisa zveutano Executives vakakwanisa kushanda zvakanyanya munyika itsva zveupfumi ezvinhu.
The rorusununguko Graduate Studies anopa mukana mberi nezvidzidzo mapurogiramu internship maererano rwaakasarudza chikuru kana panguva mugari wemo kosi, ndiro chikamu multilevel maumbirwo dzakakwirira dzokurapa dzidzo Russian Federation.
The International Institute of Medical Education uye Cooperation inodzidzisa vanachiremba kuti dzimwe nyika.
The Institute of Advanced Nursing inodzidzisa vanachiremba nokuda zvesekondari inokosha nyanzvi uye kwakakwana.
The Institute of Training Advanced inotsigira mberi unyanzvi nyanzvi uye zvokurapa mudonzvo kudzidzisazve.
Unoda kurukura Voronezh State Medical Academy ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Voronezh State Medical Academy pamusoro Map
Photos: Voronezh State Medical Academy pamutemo Facebook
Voronezh State Medical Academy wongororo
Join kukurukura pamusoro Voronezh State Medical Academy.
Other mumayunivhesiti mune Russian Federation
Southern Federal University Rostov
Moscow State University of Civil Engineering Moscow
Kazan State Technical University ainzi pashure A. N. Tupolev bhaira
Russian State University of Oil uye Gas Moscow
Discover nyika soon
Discover basa soon
Shandisa ikozvino zvivako soon